कांग्रेस महामन्त्रीमा निर्वाचित गगन थापा को हुन् ? : RajdhaniDaily.com sharethis
कांग्रेस महामन्त्रीमा निर्वाचित गगन थापा को हुन् ?
थापाको संक्षिप्त जीवनी :
युवा नेता गगन थापाको जन्म विस ४ साउन २०३३ सालमा सोलुखुम्बुमा भएको हो । बुवा महेन्द्रकुमार थापा र आमा रामेश्वरी थापाका छोरा थापाले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनका दुई छोरी छन् ।
माओवादी महाधिवेशन : बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल